Kaalmaddii ugu horaysay ee Caalami ah ee Caruurta Rohingya oo gaartay Bangaladesh | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Kaalmaddii ugu horaysay ee Caalami ah ee Caruurta Rohingya oo gaartay Bangaladesh
Kaalmaddii ugu horaysay ee Caalami ah ee Caruurta Rohingya oo gaartay Bangaladesh
Dhaka-(SONNA)-Hayadda u qaabilsan Q/M daryeelka Caruurta ayaa sheegtay in ay gaareen dalka Bangaladhesh Shixnadihii ugu horeeyay ee gargaar ee loogu talagalay caruurta Qaxootiga ee Rohingya ee u cararay dalka Bangaladhesh.
Shixnadahan gargaarka ee deg-degga ayaa gaaraya 100 tan, oo sida qorshuhu yahay loo qaybin doono carruurta Rohingya iyo Qoysaskooda sida hayadda unicef ku faafisay barteeda Internetka.
Warku wuxuu intaasi raacinayaa in Shixnaddaan gargaarka lagu gaarsiiyay caasimadda Bangaladhesh ee Dhaka duulimaadyo dhanka hawada ah, waxaana loo sii daabuli doonaa goobaha ay ku sugan yihiin Caruurta Qaxootiga Rohingya ee ku yaal xuduudda labada dal.
Dhanka kale wakiilka hayadda unicef ee Bangaladhesh ayaa sheegay in Caruurta qaxootiga ah ee Rohinhya haddii ay helaan biyo nadiifa ay taasi ka hortag u noqon doonto cudurada faafa gaar ahaan Shubanka.
Previous articleSaddex ka mid ah Ciidamada Nabad ilaalinta Mali oo la dilay
Next articleRa’iisul Wasaare Ku xigeenka dalka oo booqday Isbitaalka Digfeer.(SAWIRRO)